Hordhac: Man United Vs Watford: Red Devils Raadinaysa In Ay Guul Ku Macasalaamayso Garoonkeeda Old Trafford – Kooxda.com
Home 2018 May Ingiriiska, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino Hordhac: Man United Vs Watford: Red Devils Raadinaysa In Ay Guul Ku Macasalaamayso Garoonkeeda Old Trafford
Hordhac: Man United Vs Watford: Red Devils Raadinaysa In Ay Guul Ku Macasalaamayso Garoonkeeda Old Trafford
Kooxda Man United ayaa garoonkeeda Old Trafford ku soo dhawayn doonta kooxda Watford kulan ka tirsan kulankii ugu dambeeyay ee horyaalka premier League.
United ayaa kulanka soo galaysa iyada oo aan wax guul ah gaarin labadii kulan ee ugu dambeeyay ee horyaalka premier League lana kulantay guuldaro iyo bar-baro.
Man United ayaa si weyn u doonaysa in ay taageerayaashooda hortooda ku gaaraan guul ay ku macasalaameeyaan taageeryaaasha waliba gaaraan guul kasoonida siisa ka hor kulanka Finlka FA Cup-ka ee sabtida dambe.
Kulanka: Man United Vs Watford
Manchester United ayaa badisay 13 ka mid ah 14kii kulan ee ugu danbeysay ee ay la ciyaareen Watford tartamada oo dhan, waxaana laga badiyay kaliya Bishii September 2016 kulan ka dhacay garoonka watford ee Vicarage Road.
Red Devils ayaa ah kooxda ugu badan ee guul gaartay kulamada ugu dambeeya horyaalka premier League iyaga oo badiyay 17 kulan waxa ay kaliya xilli ciyaareedka ku dhamaysteen guuldaro laba kulan waxana ay kala yihiin Tottenham Hotspur 2001 & West Ham United 2007.
Kulankan ayaa noqon doona kulankii 500-aad ee Premier League ee ka dhaca Old Trafford waxana goolasha ugu badan laga dhaliyay tartanka marka loo eego tartamada kale (1,406).
Troy Deeney ayaa United ka dhaliyay 3 gool oo rikoore ah kaliya waxa ka badan Steven Gerrard kaas oo Man United ka dhaliyay 4 gool oo rikoore ah taariikhda tartanka.